Gaas: Xiriirkii dowladda Federaalka waan jarnay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas: Xiriirkii dowladda Federaalka waan jarnay
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas ayaa ku dhawaaqay inuu maamulkiisu xiriirka u jaray dowladda Fderaalka ah ee Soomaaliya, kadib markii arbacadii Muqdisho looga dhawaaqay in la dhisayo maamulka mideeya gobollada dhexe, gaar ahaan Galgaduud iyo Mudug.
Gaas ayaa mowqifkaan la yaabka leh ku dhawaaqay nkadib markii uu madaxtooyada maamulka Puntland ee ku taalla Garowe kula shiray xubnaha Golaha Wasiirada.
Qodobada uu shaaciyey Gaas ayaa u qornaa sidan:
1- Dawada Puntland waxay ka soo hor jeedaa heshiska maamul usamaynta Gobolada dhexe kaa soo khilaafsan dastuurka dawlada federaalka.
2- Waxay dawlada puntland aad uga xuntahay ka qaybgalka Xunbnaha Beesha caalamka iyo in ay marhkaarti ka noqoto heshiis khilaafsan dastuurka Dawlada federaalka.
3- Waxay dawlada Puntland nasiibdaro u aragtaa in madaxdii sare ee dowlada federaalka ay horsed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya Dastuurka dawlada federaalka ah iskana horkenaya Bulshada somaliyeed.
4- Dawlada Puntland waxay wada tashi ugu yeeraysaa Xubnaha kaga jira Goloyaasha dawlada dhexa ee ka soo jeeda deeganada Dawlada Puntland muddo 15 casho gudahood, ugu dambeyn 15 August 2014.
5- Dawlada Puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubintii uga wakiilka aheyd Gudiga dib u eegista Dastuurka Marwo Caasha Geele Diriye.
6- Dawlada Puntland waxay go’aan ku gaartay inay gabi ahaanba joojiso wixii xiriir iyo wada shaqayn ah ee ay la lehayd dawlada dhexe ee federaalka.
7- Dawlada Puntland waxay cadaynaysaa wax ala wixii dhib ah ee ka yimaada heshiiskaas aan sharciga ahayn ee mamul u samaynta Gobolada dhexe ee lagu sheeganayey qayba ka mid ah Deegaanada Puntland ay mas uul ka tahay dawlada federaalka ah.
Ma aha markii ugu horreysay ee maamulka Puntland ku andacoodo inuu xiriirka u jaray dowladda fderaalka ah ee Soomaaliya, ee waxaa sidaas oo kale horay ugu dhawaaqay madaxeynihii Gaas ka horeeyey C/raxmaan Faroole.